Manjaro 2021-07-28, kugadzirisa pamwe nekuvandudza kunyanya kwe KDE | Linux Vakapindwa muropa
Pasina vhiki rapfuura takaisa chekupedzisira uye tatova neimwe. Nhasi masikati, pandakasvika kumba ndikabatidza PC yangu yakangwara kwazvo, ndakaona kuti paive nekugadziriswa kweanopfuura 700MB. Ndichitarisa pamusoro ndakaona kuti Atomu neFirefox zvakagadziridzwa, saka, ndisingaone chero chinhu chero pawebhusaiti yepamutemo kana mune chero rutsigiro chat, ini ndasara ndakambopokana. Asi gare gare vazivisa kuvhurwa kwe manjaro 2021-07-28, inova itsva yakagadzika vhezheni yekumisikidza kwavepo.
Kunyange zvakadaro zvaziviswa seyakagadzika vhezheni, uye zvinoreva kuti pane shanduko yemhando dzese dzakasarudzika uye dzisiri dzechokwadi, avo vakabatsirwa zvakanyanya vanga vari vashandisi veKDE, nekuti ivo vakagadzirisa mashandisirwo eiyo shanduro yaChikunguru uye nharaunda yemifananidzo yakwira kusvika Plasma 5.22.4 iyo yakatangwa nezuro.
Manjaro anoratidza 2021-07-28
Mazhinji emakona eManjaro akagadziridzwa. Ivo vanoyeuchidza zvakare kuti iyo 5.12 nhepfenyuro inoiswa mucherechedzo seEOL, saka haizogamuchire mamwe maramba Iyo yakakwira-kusvika-kudhara yakagadzikana ikozvino Linux 5.13.5-1.
Systemd iri pa248.6.
Zvimwe zvinogadziridzwa kubva kuCinnamon.
Firefox ikozvino yave pa90.0.2.
LibreOffice yakadzvanywa ku7.1.5.
Zvimwe zvinowanzo gadziridzwa
Zvinotoshamisa kuti iyo yepamusoro-yepamusoro-soro ISO ichiri iyo yeManjaro 21.0.7. Manjaro 2021-07-28 inowanikwa kune aripo maficha; Izvo zvinongofanirwa kuvhura Pamac uye kugadzirisa zvese mapakeji kana kuvhura terminal uye kunyora sudo pacman -Syu. Kana tikazviita nenzira yechipiri iyi, iyo Flatpak uye Snap mapakeji haigadziridzwe, inova zano rakanaka kana tichida kushandisa nguva shomana yekuvandudza mashandiro.
Manjaro 21.1 Pahvo ikozvino yave yechitatu Kuburitswa Musarudzo uye haifanire kutora nguva kuti ioneke pane yepamutemo Manjaro webhusaiti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Manjaro 2021-07-28, nyowani yakagadzikana kugadzirisa pamwe nekuvandudza kunyanya kweKDE neLibreOffice 7.1.5
PulseAudio 15.0 ikozvino inotsigira bluetooth LDAC uye AptX codecs uye inosvitsa shanduko idzi dzese